Thwebula STANDARD Codecs for Windows 9.5.4 – Vessoft
WindowsI-MultimediaCodecsSTANDARD Codecs for Windows
Ikhasi elisemthethweni: STANDARD Codecs for Windows
IZINGA codecs-Windows – a set of amakhodekhi futhi decoders ukudlala amafayela alalelwayo video. Isofthiwe wenza scan eningiliziwe drive system bese ubuyisela olufakiwe amakhodekhi izinguqulo zezinye yesifunda siqu yayo ukunikeza ukuhambisana mkhulu. IZINGA codecs-Windows uyakwazi ukudlala iningi takhiwo nabezindaba ababambi ezilalelwayo nezibukelwayo. Futhi IZINGA codecs-Windows ikuvumela ukususa izingxenye ngazinye iphakethe ngaphandle isidingo ukususa zonke amakhodekhi.
Ukungabikho abadlali ezengeziwe
Yemiphumela of amakhodekhi ezikhona
Ukusakaza Video in iziphequluli eziningi
Ukususwa yezingxenye ngazinye iphakethe
Thwebula STANDARD Codecs for Windows
Amazwana ku STANDARD Codecs for Windows
STANDARD Codecs for Windows software ehlobene
I-FFDShow – ithuluzi lokunquma, ukucindezela noma ukucubungula amafayela alalelwayo nevidiyo. Isoftware ikuvumela ukuthi ukhethe isethi yama-codec afiselekayo futhi ungasebenza ngemibhalo engezansi.
Isidlali semidya nge iqoqo imisebenzi eyisisekelo. Isofthiwe isekela engezansi, search kokuqukethwe ku-YouTube futhi ukudlala of Shoutcast imifudlana.
I-Home Photo Studio – isitudiyo sezithombe sasekhaya esisethi enkulu yamathuluzi wokuhlela, imiphumela, kanye nokuhlunga okuhlukile ukucubungula izithombe zedijithali nezithombe ezinemifanekiso.